Ra'iisal Wasaarihii Dalka Suudaan oo ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ra'iisal Wasaarihii Dalka Suudaan oo ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ra’iisal Wasaarihii Dalka Suudaan oo ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay
Ra’iisal wasaarihii dalka Suudan Cabdalla Xamduuk ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii Ra’iisal wasaaraha dalkaasi.
Wuxuu faahfaahiyay waxqabadkii xukuumadiisa iyo guulihii uu gaaray, isagoo fariimo kala duwan u diray dhinacyada milateriga, siyaasiiinta iyo shacabka dalkaasi, isagoo Suudaan u rajeeyay inuu ka gudbo marxaladaasi.
Wuxuu shaaciyey inuu dariiqa u banneeyay qof kale inay dalkaasi hoggaamiso, si xaaladda dalka Suudaan uu uga gudbiyo, markii ay ku adkaatay inuu hore ugu socdo.
Previous articleRW Rooble oo la kulmay Madaxda Galmudug, Hirshabeelle iyo K/Galbeed (Arrimaha la isku hayo)
Next articleJabhad shaacisay inay qabsatay Magaalada Beledweyne iyo maamul ay ka dhiseyso.